Filoha RAVALOMANANA Marc : « fakan-tahaka ireo maherifon’ny 1947 » | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Filoha RAVALOMANANA Marc : « fakan-tahaka ireo maherifon’ny 1947 »
« Aoka tsy handalo fotsiny izao fahatsiarovana ny tolona nataon’ny Raiamandreny izao » hoy ny Filoha RAVALOMANANA raha nitafa tamin’ny vahoaka Malagasy ny tenany. « Tsy ho fahazarana fotsiny ny fanaterana voninkazo eny amin’ny tsangam-bato fa mba tena hanamasaka ny fitiavan-tanindrazana ao amintsika » hoy ihany izy. Amin’izao androan’ny 29 Marsta izao dia niantso ny vahoaka Malagasy rehetra ny tenany mba hampitsahatra ny fifanenjehana sy ny fifankahalana ka hanandratra avo ny fifampihavanana ary nomeny toromarika ho lohalaharana amin’izany ireo mpandala ny ara-dalàna tsy an-kanavaka.
« Ny firaisan-kinan’ireo mpitolona tamin’ny 1947» hoy ny Filoha « dia modely ho antsika taranaka aty aoriana ». Namafisiny fa nankasitrahiny manokana ny nahavitan’ny volavolan-dalàna mikasika ny famotsoran-keloka nialohan’ny fahatsiaroavana ny androa androany mba ahafahan’ny mpiray tanindrazana tsy ankanavaka mandray ainga vao amin’ny fitadiavam-bahaolana ho an’ny Firenena. « Hafa ny omaly » hoy ny Filoha RAVALOMANANA raha niresaka mikasika ireo izay nahatsiaro tena ho nahilika tamin’ny fotoana nitondrany ny tenany. Nentaniny ny rehatra mba ho vonona hiara-hiasa hampandrosoana ny Firenena satria « izany no nitoloman’ireo tia tanindrazana tamin’ny 1947 » hoy ihany ny Filoha RAVALOMANANA.